တစ်လအတွင်း အကောင်းဆုံး သတင်းဟာသ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တစ်လအတွင်း အကောင်းဆုံး သတင်းဟာသ
တစ်လအတွင်း အကောင်းဆုံး သတင်းဟာသ
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Mar 28, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Facebook | 29 comments
တောင်ငူမြို့ ကွင်းပိုင်းရပ်ကွက်မှာ မဲဆွယ်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်လောင်း ဒေါက်တာ ဝေေ၀သာ ရဲ့ အဖြစ်ကို သတင်းဖတ်ပြီး ရွာထဲက အိမ်နီးချင်းသူငယ်ချင်းရောင်းရင်းတွေလည်း ဖတ်ပီး ဟာဒယရွှင်ဆေးလေး ခံစားရစေဖို့ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချ လိုက်ပါတယ်။
မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲ.. ဗြဲ.ဟားးးးး
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံးကြပါစေ..။
မှတ်ချက်။ ။ ဂေဖက်မှ အမတ်မင်းအားပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျုပ်ပြောရင်လည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် နေရာကောင်းတွေ လိုက်မပို့ဘူး နော်.
မလိမ့်တပတ်တွေ ခံရတာကို သဘောကျလို့ အားပါးတရ ရီသွားပါတယ်ဗျို့…
မှန်းချက် နဲ့ နှမ်းထွက် လန်ထွက်သွားခြင်း ပေါ့ဗျာ ။ အဟက်
ဘူးထွား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟားအောင်မလေးဗျ ရယ်လိုက်ရတာ မျက်ရည်ရော အီအီးရောထွက်တော့မယ် ဟီးဟီးးးးး ဟားးးးဟားးးးး
ဟီး ဟီး..။ ငါသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့ တွေးနေမှာလား။ စောစောကတည်းက ဘယ်အဖွဲ့ကဆိုတာ ပြောသင့်တာပေါ့။ ခလေးတွေက ဘာသိမှာတုန်း။ ခုတော့ အဟက် အဟက်..။
ဟီးးးးးးးးးးး ရီလိုက်ရတာ ဒီအတောအတွင်းဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဟာသတွေထဲမှာ
ဒီဟာသ အပြောင်မြောက်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးပဲ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဟာသလေး…ကလေးများရိုးသားကြတာ အမြင်အတိုင်းပါဘဲ
၀ါး …. ဟား ဟား ဟား…… အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ခုခေတ်ကလေးတွေ သိပ်တော်ကြပါတယ်ဆို။ ကဲအခု လက်တွေ့ပဲ။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ဒီမိန်းမက အောင်မင်းမိန်းမ မလား။ သူယောက်ျား နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ သူကတစ်ခါထပ်ပြိုင်တာပေါ့။ အော်ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ လင်နေရာ မိန်းမက တစ်ခါပြိုင်။ နောက်ပြီး တင့်ဆန်း နိုင်တဲ့နေရာမှာ သူသား ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းက တစ်ခါပြိုင် အော် … တရားရစရာပါလား။ ဒီကောင်ဆို မဲဆွယ်တဲ့နေရာမှာ ၅၀၀၀ တန်တွေတောင် ကျဲသေးတယ်ဆို … အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင့်အတန်းမရှိတာကိုဖော်ပြတာပဲ။
ဟား .. ဟား .. ဟား
တွေ့ရား .. တွေ့ရား ..
ကလေးတွေတောင် သိဒယ် ..
ဒေါ်စု ဘုန်းက မသေးဘူးဆိုတာ တွေ့ပီ မဟုတ်လား …
မတူရင် သွားပြီး မတုကြနဲ့ ကိုယ့်လူတို့ရဲ့ …
ပြားသွားမယ် .. ဘာမှတ်လဲ …
၆ချက် ကွဲချက်က9လောက်ရှိတယ်…
ကလေးအတွေးဟာရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါကိုမရိုးမသားသွားလုပ်တော့ ခံရတာပေါ့။ နဲတောင်နဲသေး။ ဒီထက်မက ခံရမှ မှတ်မှာ။
ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော – ရင်ဘတ်နောက်ကကျော
ဒေါ်ဝေေ၀သာကို ဘယ်သိမလဲ TVမှာမှမပေါ်တာ…ဘယ်ချောင်ကလဲမှမသိတာ၊
အိမ်က ၅နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ ခလေး တောင် ဒေါ်စုကိုသိတယ်။ TVမှာပေါ်လာရင် ဒေါ်စု၊ဒေါ်စုလို့အော်တတ်နေပြီ။
ဟီးဟီး … ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ .. အူတောင်နာတယ်…
စေတနာသန့်သန့်နဲ့ မလှူပဲ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရည်သွန်းပြီး ဆုတောင်းပေးပါဦး ဘာဦး လုပ်တော့ … အရှက်ကွဲပြီပေါ့ … ဟီးဟီး … ကလေးတွေလည်း .. ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ အမျိုးသမီးဆို … အမေစုပဲ သိတာကိုး … ။ ဟီးဟီး
ဂယ်လားဟင် ဂယ်လား အဟီးရီရတယ် ကလေးတွေကို သွားကျွေးတာကို ကလေးမသိတာဘာဆန်းလဲ မီးတို့တောင်မသိဘူး မီးတို့က ဖွားစုပဲသိတာ
ဖြစ်ရလေ… အန်တီဝေရယ်…. ဟားဟားဟား
ရယ်သောသူသည် အသက်ရှည်၏ ဆိုထားတော့
ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ဟာသသတင်းက ရွာသူားတွေ တကယ်ရီရတယ်ဆိုတော့
ဆုတောင်းခိုင်းတာက ဘယ်သူတွေကို တောင်းပေးပါလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ခုတော့ ကျွေးပြီး အရာမရောက်ဖူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်…
အော်….အခုမှ မီရာဆွဲပြီး အတင်းလုပ်ယူရတာကိုး….အမှားနဲနဲတော့ရှိမှာပေါ…
ဒေါ်စုဆိုရင် ဦးမာဃတို့ နတ်ပြည်မှာတောင် နာမည်ကြီးတယ်။
မတူရင် မတုနဲ့ ကွဲ့
မိုက်တယ် ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေရမယ်လေ ဒါအမှန်ပဲပေါ့
.နှစ်၇၀ နီး နေတဲံ့……
အဲလို ပြန်ပြီးမေတ္တာပေးတာ ခံစားရတာပါ..
တကယ်ကိုရယ်ရပါပေတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အ၇မ်းအိပ်ငိုက်နေလို့ ဘာစာဖတ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ တစ်လအတွင်း အကောင်းဆုံး သတင်းဟာသများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့တာနဲ့ဖတ်လိုက်တာ အိပ်ငိုက်ကိုပြေသွားပါတယ် တကယ်ကိုရယ်ရပါပေတယ် ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်